fitbit alta bhendi
Musika wekusimbisa tracker wakazara vanhu sezvawakamboita, uye uchingove wakawandisa nenguva. Zvakangodaro, kubatsirwa kwemakwikwi aya ndekwekuti maturusi mazhinji arikusunungura anoita basa rakakura rekutarisisa hutano hwako uye kusimba pasina kurasikirwa nebhomba.
Zvakadaro, zvakadaro, kuona maficha achienda kumidziyo yakanakisa kunogona kuve kwakaoma. Neraki, isu tiri pano kuzobatsira. Isu takarubvisa vakaneta kuti vasarudze chete akanakisa mafitness trackers pamusika kuti usarudze kubva. Tinewo akasiyana maitiro e akanakisa smartwatches uye akanakisa GPS mutambo mawadhi zvakare, kune avo vangada kusiyiwa kwakasiyana kweanopfeka.
Kana chaunoda chiri nhanho kuverenga, calorie tracking, kurara zano uye pamwe nemoyo chiyero chekutsvaga uye GPS yekubatanidza, iwe uri munzvimbo chaipo.
Iyo yakanakira yekusimbisa tracker yekutenga nhasi
Heino yakanakisa yekusimbisa tracker pamusika panguva ino, kuenzanisa kusununguka kwekushandisa nemutengo uye zvese zvinotenderera maficha…
Iyo Fitbit Charge 4 inotora zvese zvakanaka pamusoro peFitbit Charge 4 uye inowedzera GPS kwairi. Izvi zvinoreva kuti chiri nani kumira musimba fitness kifaa, kugona kukupa iwe zvishoma ruzivo pasina kudiwa kwefoni yakabatana. Iyo ichiri idiki, yakagadzikana uye ichikwanisa kutarira ese ako ezuva nezuva masitepisi, kurara uye zviitiko, pamwe nekuwedzera wakawedzerwa wekukwanisa kukupa nzira chaiyo uye nekukurumidza kumhanya uye kutasva. Iyo inotsigirawo Fitbit Pay yemari inobhadharwa.
Iyo yakaipa iyo iyo iyo functionality inounza ndeyekuti inorema GPS yekushandisa inodhonza bhatiri nekukurumidza, asi kana iri yehutano tracker iwe uri shure, izvi zvechokwadi zvinonongedza mabhokisi ese. Pamusoro peizvozvo, iyo Fitbit ecosystem yakakura, inotsigirwa neyakajeka yeapp inopa data rako nenzira iri nyore kunzwisisa uye isingashamisi zvakawandisa nenhamba - pachinzvimbo ichi inoratidzira mashereni anonzwisisika, saka unogara uri mufananidzo.
Verenga iyo Fitbit Charge 4 wongororo
Kunakisisa kwevamwe ...
Iyo Fitbit Kuroja 4 haisi yemunhu wese hazvo. Nerombo, kune zvakawanda zvimwe zvakanaka zvemitambo trackers kufunga kuti isu tamboongorora kana iwe uchida kusimuka, tanga kufamba uye ugare pamberi pemutambo. Heano mamwe mashoma emasimba ekutungamira akafanirwa nekufunga:
Ehe, iyo Fitbit Charge 4 inogona kunge iri sarudzo iri nani, asi iyo Fitbit Charge 3 ichine kukwidza kwakawanda. Kwete chete iyo inopa iwo ese metrics akadai sekurara, matanho uye zviitiko, asi nekuda kwekuti yakura zvishoma, inopa nani mutengo wemari.
Chokwadi, iwe unorasikirwa nezvimwe zvezvinyorwa zvemusoro seGPS, asi kana usiri kuzoita zvakawanda zvekumhanya kana kutasva - kana usingafarire zvekumhanya uye nekwareba danho - ipapo iwe unogona kuwana zvese zvaunoda kubva ku Kuchaja 3. Kana iri nzira yakawanda yekutevera iwe yaunoda kwete yemitambo yekutevera, iyo Charge 3 ine zvakawanda zvekupa.
Iyo Garmin Vivoactive 4 inokonzeresa zvakawanda zvekunaka izvo zvinopihwa naGarmin mukusimudzira kwayo trackers trackers uye inovaisa muchishandiso icho chiri kuwanikwa zvakanyanya uye ichipa kukosha kwakanaka kune iyo mari. Iyo inopa hukuru hwemwoyo wekutevera uye GPS, pamwe nekutarisa zvinhu zvakaita matanho, kurara uye yako yezuva nezuva chiitiko.
Ichi chishandiso cheGarmin chakanangana neavo vanoda izvo zvinhu zvese asi vasinganyatsozviona semutambi anoda mabasa epamberi uye sarudzo dzinopihwa ne Forerunner kana Fenix ​​zvishandiso. Izvo izvo Vivoactive 4 inopa ingangove yakaringana kukwana kwehutano hwekutevera kuchengetedza zvakanyanya kufara, mune yakasarudzika package ine yakawanda sarudzo.
Verenga iyo Garmin Vivoactive 4 ongororo
Iyo Fitbit Yakafuridzira HR inopa zvinenge zvese zvinoitwa neCharge 3 asi mune yakapetana, yakachipa pasuru. Haisi yekutanga mukutaridzika seChhenge 3 asi inopa hukuru hwakakosha hwemari, tambo dzinochinjika uye huwandu hwezvinhu zvinosanganisira kurovera kwemoyo, kurovedza muviri kutsvaga uye kugona kurara kwekutevera.
Iyo Inspire HR inotsiva iyo Fitbit Alta uye Fitbit Flex mitsara, ichipa yakanakisa OLED kuratidzwa, kushanda kukuru, hupenyu hwakanaka hwebhatiri, zviziviso zve smartphone uye zvakare isina mvura. Nekuti mutengo mutengo, iyo Inokurudzira HR yakanakisa yekusimba tracker.
Garmin Achira 645 Music
Iyo Garmin Forerunner 645 Mimhanzi inonyanya kutarisa wachi pane yakajairika chiitiko tracker asi inopa chimbo kuchengetedza, kusina mvura, shanduko dzinoshanduka, chiyero chemoyo, GPS, kukwira, cadence uye kutenderera saka iri sarudzo yakanakira kune avo vese nezve data.
Inopa kushanda kwevakawanda smartwatches nezviziviso uye mabasa, apo uchipa yakanakisa mitambo uye chiitiko kuronda, dhizaini dhizaini yeiyi chiitiko chiitiko tracker uye yakasununguka kupfeka ichiri kuwiriranawo neBlue headphones. Iyo inodhura zvakanyanya kana ichienzaniswa nezvakada zveFitbit Charge 4 zvisinei uye nepo hupenyu hwebheti huri nani pane vakawanda smartwatches, haisi nani kupfuura kufarira kweiye Inspire HR.
Garmin Forerunner 645 Dzokororo yemumhanzi
Garmin ndiyo yazvino kukunda mutsetse wekutengesa, iyo Fenix ​​6, ibwe rinotonhora dhadha re smartwatch, uye chimiro chayo chekunaka chimiro chakanyanya kunaka-mukirasi. Chikonzero isu tisina kuzviisa pamusoro peiyo rondedzero, zvisinei, ndeyekuti hazvina kunaka kuve mune vakawanda mabhajeti. Iyo Forerunner 645 ine yakakura seti yezvinhu pamutengo mukuru, asi iyo Fenix ​​6 Pro inozvitora zvakatowanda pane ese mabairo.
Kana iwe uchida kushandisa yakakura, iwe uri kuwana yakakura-vhiki maviri bhatiri hupenyu, neine imwe yekutarisisa yakanakisa mune chero chishandiso, uye mepu inogona kukuendesa kure kure neyakarohwa track sezvo iwe uchida kuenda . PacePro, parizvino, chizaruro kana iwe uri mukumhanya, uye ichakubatsira zvechokwadi kutungamira yako nhanho kune ayo asina kujairika maga.
Garmin Fenix ​​6 Pro ongororo
Kusendama kwaFitbit kunowedzera munzvimbo ye smartwatch neFitbit Versa 2, ichipa muvaravara, NFC ye Fitbit Pay uye akawanda smartwatch maficha, kusanganisira mamwe echitatu bato maapp. Kune chemoyo chemoyo chemoyo, ane altimeter uye iyo Vhesi 2 haina mvura zvakare.
Kufanana neCharge 3, inokanganisika pane yakavakirwa muGPS, ichipa GPS yakabatana pachinzvimbo, asi inokubvumira kuti ubatanidze neBlue headphones yekuteerera mimhanzi uye inopa zvese zvakanaka zveFitbit chikuva. Iwe unozobhadhara zvakanyanya pachigadzirwa ichi pane icho Charge 3 asi kana iwe uchida chimwe chinhu chakakura pasina kuenda kuzere smartwatch, iyo Versa 2 ndiyo yakanaka sarudzo.
Iyo Fitbit Versa Lite Edition yakachipa zvishoma pane iyo Fitbit Versa 2 (pamusoro), ichipa dhizaini yepedyo-yakafanana uye zvimwe zvinhu zvikuru. Kufanana neVersa 2, iyo Versa Lite Edition haina mvura, ine akawanda smartwatch maitiro anosanganisira mamwe echitatu bato maapp uye inopa ese makuru eFitbit chikuva maitiro zvakare.
Iyo inorasikirwa neFitbit Pay, haina kupa mimhanzi pane bhodhi uye haigone sezvazvinogona maererano nekushambira kutsvaga seinonyanya kudhura Versa 2. Zvakazara hazvo, iyo Versa Lite Edition mutengo wakanaka wezvinhu zvainoita kupa uye inouya mune mamwe makuru eruvara rwekusarudza, kusanganisira yepepuru uye yebhuruu iyo ine mavara-matched aluminium Casings uye tambo.
Andings Steel HR Mutambo
Iyo Andings Steel HR Sport ndiyo nyowani mhando yeiyo Andings Steel HR, zvishoma zvishoma pasi peiyi runyorwa. Iyo inopa dhizaini yakafanana asi inosvitsa tambo yakasarudzika, pamwe neVO2 Max kuyera uye GPS.
Ichi chiitiko tracker chinozadza mapundu akasiyiwa nemamwe maheti akabatanidzwa uye akangwara akazara. Iyo inopa hupenyu hwakanaka hwebhatiri, yakanaka analogue uso uye haina kunyanyisa kudhura. Iyo Steel HR Sport inoteedzera inopfuura makumi matatu emitambo, yakareruka uye yakasimba uye yakarongedzwa neyakakwana maficha kuona kuti vakasimba vemitambo havasiywi vanonzwa vapfupi.
Withings Steel HR Sport ongororo
Polar yakagadzirisazve mawindo ayo emitambo muna 2018 uye yakatangisa Vantage yakatevedzana. Iko kune V iyo iri mhando yepamusoro uye iyo M, iyo inorasikirwa mamwe mabasa uye haina iwo chaiwo yakafanana premium dhizaini seV, asi inopa kwakawanda kwakafanana kunaka. Iyo inopa hukuru hwekutevera kwemoyo uye GPS, ine yakawanda metrics yekusimba mafeni uye mamhanyi.
Iyo inotsigirwa nePolar Flow, yakanaka app yekuwona yako data uye kuronga zvinhu uye kune avo vari kuda kutevedzera kudzidziswa kwavo, iyo Vantage M inoisa kuratidza kwakanaka ine akawanda metrics anobatsira. Iko isingakwanisi kukwikwidza kuri mune yakangwara mabasa - haina kunyatsobatana saGarmin kana Fitbit, hapana rutsigiro rwekubhadhara kwefoni kana mimhanzi. Asi iyo M iri nani pane mari pane iyo Vantage V, saka isu tinofunga kuti ndiyo sarudzo iri nani.
Polar Vantage M wongororo
Iyo Fitbit Alta HR yakatsiviwa neiye Inspire HR, iyo inopa zvimwe zvinhu asi mune yakafara zvishoma uye yakachipa kuvaka. Iyo Alta HR ichiri huru yekusimbisa tracker kunyangwe, uye goof kukosha kwemari, ichipa mukana wepuratifomu yaFitbit mune yakatetepa uye ine chimiro.
Iko hakuna kudzivirira mvura, GPS kana kukwirira dhata uye iyo Alta HR haina chimiro chakapfuma seyakakura uye nyowani Charge 4, kana iyo Inspire HR, asi inopa yakaderera, inoyevedza yemazuva ese yekutevedza tracker ine moyo wakanaka wekuteedzera uye zuva rakawandisa -ku-kwezuva chiitiko chekutarisa. Kurara uchiteerana kwakanakawo uye kunouya netambo dzinochinjika saka unogona kushandura mabhendi kunze kuti utaridze kutaridzika.
Fitbit Alta HR wongororo
Iyo Samsung Galaxy Watch Active 2 imwe sarudzo iri zvishoma kutarisisa kupfuura chiitiko tracker, asi ichiri yakazara yakazara nezvinhu zvinosanganisira kudzivirira mvura, chiyero chemoyo uye yakavakirwa muGPS. Iyo inopawo yakazara-yakagadzirirwa smartwatch kugona
Iyo ndeimwe yezvakanakisa zvigadzirwa pane rondedzero, zvakare - isu tiri mafani mahombe ekutariswa kwayo kwakapetwa. SaGarmin Forerunner 645 Mimhanzi kunyange zvakadaro, haungazowana hupenyu hwebhatiri remidziyo yakaita seFitbit Charge 3 neFitbit Inofuridzira HR, uye kurara kwekutevera hakuna kuzadzikiswa pane zvaFitbit zvemhando dzakasiyana siyana.
Samsung Galaxy Kutarira Active 2 ongororo
Iyo Fitbit Inspire ine yakafanana chaizvo dhizaini kuExpire HR, zvishoma zvishoma kumusoro iyi rondedzero. Iyo Inspire inorasikirwa nezvishoma pane izvo zveExpire HR zvehunhu, kusanganisira kurovera kwemoyo, kugona kurara nekurara uchitevedzera, asi haina mvura uye yakasununguka kupfeka.
Iko hakuna kushambira kwekutevera senge, asi iyo Fitbit Inspire ine inoyevedza OLED kuratidzwa, smartphone zvikwangwani uye yeiyo yekutanga chiitiko chekutarisa maitiro iyo yaanopa, inoita chaizvo.
Iyo Fitbit Ionic haingounise chete yakasimba, isina hunyanzvi dhizaini ine runako runongedzo, inowedzerawo yakavakirwa muGPS uye yakazvitsaurira kushambira mashandiro ayo iyo yekutanga Blaze, yakanga ichishomeka. Iine mutsva uye yakagadziriswa yemoyo-chiyero chekutarisa, smart notices, kubhadhara kubhadhara uye zvese zvinoshandiswa vashandisi veFitbit vachange vava kuziva uye rudo, iyo Ionic yaive yekutanga yeFitbit inyanzvi yakasimba.
Haisi yakachipa asi uye pane mashoma ekutsamwisa, akadai sekushaikwa kwepamberi smartwatch maficha. Iyo Ionic yakabudirira kuvhara musiyano pakati pekusimba tracker uye smartwatch asi zvakadaro kana iwe uchitsvaga chishandiso chinozadzisa ese maviri maidi, izvi zvinogona kunge zviri kwauri.
Iyo Suunto 9 inzvimbo huru yemitambo kutarisa kuitira kuti ive isina kukodzera kumunhu wese asi inopa hupenyu hwakanakisa hwebhatiri - mazuva gumi - pamwe ne10m yemvura kuramba uye yakawanda yemitambo yekutevera ine zvakawanda zvakadzama mukuputsa.
App yacho haina kunaka se Garmin or Fitbit dzimwe nzira uye dhizaini haina kutaridzika sevamwe pane iyi chinyorwa chero asi iyo Suunto 9 inowanikwa yakaitwa mutambo wemitambo yakawanda inoratidzika kune vakunda.
Suunto 9 ongorora
Iyo Garmin Vivomove inopfekeka kune avo vanoda tech kuti vapinze hupenyu hwavo nenzira isiri pachena, yekutsvaga-tarisiro. Iyo chiitiko tracker iyo inoita basa rayo nenzira understated - yakapfeka inozoita kuti ufambe usingaite senge uri kuita nhamburiko, uye nekupa kurudziro pane zvakanyanya kukosha zvezvinangwa zvekusimba - kuwedzera kufamba.
Kunyangwe kana ichienzaniswa nemamwe akareruka analogue chiitiko trackers, Vivomove iri mumakwikwi ayo pachavo kana zvasvika pakugadzira. Chikamu chinotyisa cheti. Kana paive nemagetsi ekuzungunutsa eApple notices, iyo yemoyo ratidziro uye yakawedzera robust app kuidzosera, iyi ingave ndiyo yekupedzisira inopa yemhando yayo.
Garmin Vivomove wongororo
Withings Activité Simbi HR
Iyo Andings Activité Steel HR chishandiso chakagadzirwa zvakanaka chinoita basa rakakura rekuburitsa chimiro uye chakapinza mupakeji imwechete. Iyo inopa dhizaini yakasarudzika neyekutanga michina uye zvirokwazvo ndeye chiitiko chekutarisa icho chinhambwe kubva pachiyero chakakudzwa rabara bhendi rinotaridzika revazhinji vanokwikwidza.
Kuongororwa kwemoyo-wakanaka kwakanaka, uye sekurara uchitevedzera, nepo hupenyu hwebheteri hwakanakisa. Dhizaini haina kunyengera sekuda kweFitbit Inspire HR, iyo inopa iwo maitiro akafanana, uye iyo Steel HR hairote ichiteedzera yakadzika zvakanyanya seAlta HR chero. Izvo zvakati, kana iwe uchida moyo-chiyero chekutarisa pamwe nezvimwe zvakawedzerwa analogue chikumbiro, iyi nhamba yeAunings isarudzo yakanaka.
Withings Activité Simbi HR wongororo
Garmin Lily ongororo: Izvi zvinopfeka zvevakadzi zvine zvese zvekutanga